Iilayibrari ezilishumi ezilungileyo eYurophu | Uncwadi lwangoku
Kweminye, iparadesi ayisiyonxweme esimhlophe kuphela kunye namanzi acwecwe ngekristale. Ukuba uthanda ukuhamba kwaye unomdla kwiincwadi, awunakuyeka ukuzibona ezi layibrari zintle.
Namhlanje siza kugxila kwezona ndawo zintle zeyona ndawo ibalaseleyo eYurophu. Sijoyine kolu hambo ngaphandle kokushiya ikhaya.
1 Ithala leencwadi leRoyal Monastery yaseSan Lorenzo del Escorial, eMadrid
2 IHolohov yeTheoloji, ePrague
3 Ithala leencwadi i-Abbey eSt Gallen, eSwitzerland
4 Ithala leencwadi lase-Admont Abbey, e-Austria
5 IThala leeNcwadi leKholeji yaseQueens, eOxford
6 ILayibrari yeKholeji yaseTrinity, eDublin
7 ILayibrari yaseRoyal yaseDenmark, eCopenhagen
8 Ithala leencwadi laseStuttgart, eStuttgart
9 Ithala leencwadi eliphakathi eBristol, eBristol
10 ILayibrari yeSizwe yaseFransi, eParis
Ithala leencwadi leRoyal Monastery yaseSan Lorenzo del Escorial, eMadrid
Akunyanzelekanga ukuba uye kude ukuze ucamngce lo mmangaliso woKuvuselelwa ubekwe eSan Lorenzo del Escorial, yasekwa nguFelipe II.
Inani lemiqulu kwithala leencwadi liqikelelwa kuma-40.000. Phakathi kwabo, ikakhulu siya kufumana imibhalo-ngqangi ngesiLatin, isiGrike, isiHebhere, isiArabhu kunye neSpanish. Ithala leencwadi likwanemiqulu kwezinye iilwimi ezinje ngeCatalan, isiValencian, isiPersi, iProvençal, isiTaliyane nkqu nesiTurkey.
IHolohov yeTheoloji, ePrague
Eyakhelwe kwi-1671 kwiStrahov Monastery, yenye yeelayibrari zakudala eziqokelelweyo nezixabisekileyo. Isakhiwo esingumfuziselo asihlali ngaphezulu kwaye akukho ngaphantsi kwama-200.000. Phakathi kwazo kukho imibhalo-ngqangi emalunga nama-3000 1500 ne-XNUMX incunabula. Kuya kufuneka uhlawule ukungena, nangona iindleko zingabizi kakhulu kwaye uvunyelwe ukuthatha iifoto kwaye urekhode iividiyo. Utyelelo olunyanzelekileyo ukuba iPrague yindawo yakho oya kuyo.
Ithala leencwadi i-Abbey eSt Gallen, eSwitzerland
Eli litye le-rococo lakhiwa ngo-1758, lelona libaluleke kakhulu kwilizwe elingathathi cala. Incinci kodwa inomtsalane, inamanani ayi-160.000. Esi sakhiwo sinomtsalane ongashiyi mntu engenankathalo. Ngononophelo olukhulu, bade babonelele izilayidi xa zingena ukuze zingonakalisi umgangatho. Umboniso wembali ekungekho mntu unokuphoswa kuwo.
Ithala leencwadi lase-Admont Abbey, e-Austria
Ngaphandle kwamathandabuzo indala kwaye inyanzelisa kuyo yonke i-Austria. Eli thala leencwadi lathunyelwa ngukumkani u-Abbot Matthäus Offner kumyili wezakhiwo uJoseph Hueber. Oqale ukwakha ngo-1776. Ithathwa njengelona thala leencwadi likhulu leemonki ehlabathini. Iqukethe iisampulu ezingama-200.000, nangona kuqikelelwa ukuba ezingama-70.000 zabuyiselwa. Phakathi kweembalasane kukho umbhalo-ngqangi okhanyisiweyo we-Admont Bible.
IThala leeNcwadi leKholeji yaseQueens, eOxford
Idityaniswe kwiDyunivesithi yaseOxford, inezindlu ezingama-50.000. Ifanele ibhotwe, yinto ekungekho mthandi weencwadi ukuba ayiphose. Eyona nto intle malunga neThala leencwadi eliPhezulu kukuba isasebenza. Ngaba unokucinga ukuba ulungiselela iimviwo zakho kwimeko enje?
ILayibrari yeKholeji yaseTrinity, eDublin
Y Voila! Eli yayilithala leencwadi elikhethwe ukudubula imiboniso kaHarry Potter kunye neNtolongo yaseAzkaban. Kuya kufuneka uhlawule ukungena, kodwa malunga nee-euro ezingama-14, uya kuba nohambo olukhokelwayo. Eyona nto ibalulekileyo malunga nelayibrari, ngaphandle koyilo lwayo kunye nokusingqongileyo, yile Incwadi yeeKells.
ILayibrari yaseRoyal yaseDenmark, eCopenhagen
Ikwabizwa ngokuba yi "Black Diamond", sesona sihlalo sibalulekileyo kwiThala leeNcwadi laseCophenague. Zingaphezulu kwama-250.000 iikopi ezisasazeke kwimigangatho esibhozo kunye namagumbi okufundela amathandathu. Isakhiwo sanamhlanje esakhiwe ngeemabhile ezimnyama kunye neglasi ejonge elwandle, yenze utyelelo olunyanzelekileyo kwikomkhulu laseDenmark.
Ithala leencwadi laseStuttgart, eStuttgart
Ukufunda kunye noyilo. Nokuba ukhetha ntoni, le yindawo yakho. Lo msebenzi ngu-Eun Youn Yi uthathwa njengenye yeelayibrari ezilungileyo kwihlabathi. Uyilo lwale mihla, indawo kunye nokukhanya, shiya abo bayindwendweleyo bevule imilomo. Kolu lwakhiwo lukhulu kukho ukusayinwa kweencwadi, iminyhadala kunye nemiboniso.
Ithala leencwadi eliphakathi eBristol, eBristol
Isakhiwo njengoko sisazi namhlanje sakhiwa ngo-1906, kwixesha lase-Edoardine. Igcina iincwadi ngesiSomalia, isiArabhu, isiBengali, isiTshayina. IsiKurdish, isiPastu, isiPunjabi, isiVietnam, isiCzech, isiFrentshi, isiJamani, isiTaliyane, isiPolish, isiPhuthukezi, isiRashiya kunye neSpanish. Ukongeza koku, ababhalisi bemihla ngemihla kunye nenyanga banokwenziwa kumaphephandaba aseYurophu, e-Afrika naseMpuma.
ILayibrari yeSizwe yaseFransi, eParis
I-BnF okanye iThala leLizwe laseFrance, lelinye lawona mathala abalulekileyo kweli lizwe. Ikomkhulu labo eliphambili, uFrançois Mitterrand, ubekwe eTolbiac, emazantsi eParis. Kukho umthetho kwithala leencwadi ofuna ukuba ikopi yayo yonke imisebenzi epapashwe eFrance igcinwe. Ine -… ezizigidi ezili-13 zeencwadi ezisasazwe kuwo onke amasebe. Ezine esizifumana eParis likomkhulu leF Mitterrand, ikomkhulu leArsenal, ithala lembali leOpera kunye neyona ndawo ibalulekileyo, ikomkhulu laseRichelieu.
Le yinotshi encinci yemimangaliso esinokuyifumana eYurophu. Ke ngoku niyazi, zikhuthazeni ngokudibanisa uncwadi kunye nohambo kwaye ungayeki ukundwendwela obu butyebi bumnandi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iilayibrari ezilishumi ezilungileyo eYurophu
Enkosi kakhulu ngokudityaniswa. Kwaye enye yezona zinto zibalaseleyo lilayibrari yeNdlu yeSizwe yaseMafra, ePortugal, ebabazekayo.
Uhlalutyo olufutshane lomsebenzi "UDon Juan Tenorio" nguJosé Zorrilla